ဒီနေ့ည Battle Round မှာ တလက်လက်ထနေတဲ့ အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ တွေ့မြင်ရမယ့် နီနီခင်ဇော် - TGI Daily News
ဒီနေ့ည Battle Round မှာ တလက်လက်ထနေတဲ့ အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ တွေ့မြင်ရမယ့် နီနီခင်ဇော်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးအဆိုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ နီနီခင်ဇော်ကတော့ အမိုက်စားအသံရှင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံမက ဖက်ရှင်ပိုင်းကိုလည်း သေချာဂရုစိုက်ဝတ်ဆင်တတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ဒိုင်အဖြစ် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်နေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ကိုဗစ်ကာလမှာ ပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ The Voice Myanmar Season-3 သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Blind Audition မှာတော့ နီနီကို နီနီခင်ဇော်ဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်း ပေါ့ပါးပြီး အမိုက်စားပေါ်လွင်နေတဲ့ အနီရောင်အင်္ကျီလေးနဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ည Battle Round မှာ ဘယ်လိုဖက်ရှင်မျိုးနဲ့ တွေ့မြင်ရမလဲဆိုတာတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း စိတ်ဝင်စားနေလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်နော်။
နီနီကတော့ ဒီနေ့ညပြိုင်ပွဲမှာ တွေ့ရမယ့်နီနီရဲ့ပုံစံလေးကို ဗွီဒီယိုလေးနဲ့မျှဝေပြီး Battle Round ပြိုင်ပွဲကြီးကို စောင့်ကြည့်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လာပါတယ်။ စိန်ပွင့်တွေနဲ့ လက်လက်ထနေတဲ့ အမိုက်စားအနက်ရောင်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပြင် ကိုဗစ်ကာလမို့ ကိုဗစ်ဖက်ရှင်လေးလည်းပါအောင် Mask ကိုပါ အင်္ကျီလေးအတိုင်း ဆင်တူပြုလုပ်ထားပြီး ဖိနပ်ဒီဇိုင်းကိုပါ မြင်နေကျပုံစံတွေနဲ့ကွဲထွက်အောင် ဖန်တီးဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တလက်လက်ထနေတဲ့ နီနီရဲ့ ဖက်ရှင်ကတော့ တကယ်ကို မိမိုက်နေတာအမှန်ပါပဲနော်.. The Voice Myaanmar Season-3 ရဲ့ Battle Round ကတော့ မကြာခင်မှာစတင်တော့မှာမို့ ပရိသတ်ကြီးရေ အားပေးဖို့အသင့်ပဲမလား။
ဒီနညေ့ Battle Round မှာ တလကျလကျထနတေဲ့ အနကျရောငျဝတျစုံနဲ့ တှမွေ့ငျရမယျ့ နီနီခငျဇျော
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျတဲ့အမြိုးသမီးအဆိုရှငျတဈယောကျဖွဈသူ နီနီခငျဇျောကတော့ အမိုကျစားအသံရှငျပိုငျရှငျတဈယောကျဖွဈရုံမက ဖကျရှငျပိုငျးကိုလညျး သခြောဂရုစိုကျဝတျဆငျတတျသူတဈယောကျပါ။ ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုအမွငျ့ဆုံးသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ The Voice Myanmar သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ ဒိုငျအဖွဈ သုံးနှဈဆကျတိုကျ ဆောငျရှကျနရေသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
လတျတလော ကိုဗဈကာလမှာ ပွနျလညျစတငျနပွေီဖွဈတဲ့ The Voice Myanmar Season-3 သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ Blind Audition မှာတော့ နီနီကို နီနီခငျဇျောဆိုတဲ့နာမညျလေးအတိုငျး ပေါ့ပါးပွီး အမိုကျစားပျေါလှငျနတေဲ့ အနီရောငျအင်ျကြီလေးနဲ့တှမွေ့ငျခဲ့ရမှာဖွဈပွီး ဒီနညေ့ Battle Round မှာ ဘယျလိုဖကျရှငျမြိုးနဲ့ တှမွေ့ငျရမလဲဆိုတာတော့ ပရိသတျကွီးလညျး စိတျဝငျစားနလေောကျပွီလို့ ထငျပါတယျနျော။
နီနီကတော့ ဒီနညေ့ပွိုငျပှဲမှာ တှရေ့မယျ့နီနီရဲ့ပုံစံလေးကို ဗှီဒီယိုလေးနဲ့မြှဝပွေီး Battle Round ပွိုငျပှဲကွီးကို စောငျ့ကွညျ့ကွဖို့ ဖိတျချေါလာပါတယျ။ စိနျပှငျ့တှနေဲ့ လကျလကျထနတေဲ့ အမိုကျစားအနကျရောငျဝတျစုံကို ဝတျဆငျထားတဲ့အပွငျ ကိုဗဈကာလမို့ ကိုဗဈဖကျရှငျလေးလညျးပါအောငျ Mask ကိုပါ အင်ျကြီလေးအတိုငျး ဆငျတူပွုလုပျထားပွီး ဖိနပျဒီဇိုငျးကိုပါ မွငျနကေပြုံစံတှနေဲ့ကှဲထှကျအောငျ ဖနျတီးဝတျဆငျထားပါတယျ။ ခေါငျးအစ ခွအေဆုံး ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ တလကျလကျထနတေဲ့ နီနီရဲ့ ဖကျရှငျကတော့ တကယျကို မိမိုကျနတောအမှနျပါပဲနျော.. The Voice Myaanmar Season-3 ရဲ့ Battle Round ကတော့ မကွာခငျမှာစတငျတော့မှာမို့ ပရိသတျကွီးရေ အားပေးဖို့အသငျ့ပဲမလား။
ထက်ထက်မိုးဦး Liveလွှင့်ပြီးရောင်းတုန်းက သိန်းရာချီတန်တဲ့ ရတနာပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူအားပေးလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပေမယ့် အခုလိုအချိန်မှာ ဆရာဝန်ပီပီကူညီချင်တာကြောင့် Volunteer လုပ်ဖို့ဖောင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
သီချင်းတွေအတူတွဲဆိုခဲ့ပြီး ရိုးသားကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းမီးမီးခဲအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ Rဇာနည်